Vanyori vakazozivikanwa mushure mekufa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Pandaive mudiki uye ndaigara ndichiudza mumwe munhu kuti ndaida kuve munyori, mumwe munhu akauya kuzondiudza chirevo "vanyori vanobhadharwa chete kana vafa." Nhasi uno mutsara wadzoka kuzonditambudza uye ini handina kukwanisa kufunga nezve izvo vanyori vanozivikanwa mushure mekufa kwake.
Kufuridzirwa kwaOscar Wilde, Mark Twain uye zviuru zvevanyori vakawana bhuku rake, Poe aive munyori weAmerica uyo akazvipira kwaari kuti ararame chete nekunyora. Chinangwa chakamubhadharira kupfuura kubhuroka uye nematambudziko akakomba edoro, zvikamu zvakaona kuzvarwa kwevamwe ve nyaya dzinotyisa dzese yenhoroondo. Poe haana kungotipa isu nenyaya huru, asi akachinja zvinyorwa zvekunyepedzera nekusimudzira nemweya nemaonero zvisati zvamboonekwa. Ehezve, panguva iyo nyika payakarumbidza basa raPoe, munyori akange atofa muna 1849.
Uyo aive mumwe wemakuru vafungi vekutanga kwezana ramakumi maviri emakore, munyori wechivambo chechiJuda Franz Kafka, aive nehupenyu hune njodzi hwakatsaurirwa zvakanyanya kumutemo nekunyora. Nekudaro, munyori aigara achiratidza chishuwo chake chekuti mabasa ake ese aparadzwe kana afa. Neraki repasi rose, shamwari yake Max Brod, uyo Kafka akapa basa iri, akatanga kutenderera Metamorphosis nedenderedzwa ravo. Zvimwe zvese nhoroondo.
Hupenyu hwaEmily Dickinson hwaive muenzaniso wekuona uye, panguva imwechete, yekusahwisisa munyika yakaita seyezana regumi nemapfumbamwe umo vakadzi vadetembi vasina kuwanda, ndoda nhetembo dzakasarudzika saDickinson. Kufungidzirwa ne madingindira akaita sekufa, kusafa kana kuda yakatsaurirwa kune mudiwa asina kumbonzwa nezvake, Dickinson akanyora kudarika nhetembo zviuru gumi nezvisere dzayo gumi nembiri chete dzakaburitswa nevapepeti avo, mukuwedzera, vaigara vachishandura maitiro avo kuti aenderane nematanho enguva yacho. Akakiyirwa pamba kwemakore ekupedzisira ehupenyu hwake, Dickinson akafa muna 1886, ari iye hanzvadzi yake Vinnie uyo akawana anosvika mazana masere enhetembo mumabhuku ekunyorera mumba make.
Nguva Matikitivha emusango vakafarira kuzivikanwa kukuru mukupera kwema90, kufa kwaRoberto Bolaño muna 2003 uye kuburitswa kwebasa rake rekufa 2666 akapfura zvakakwana kufarirwa kwemunyori weChile. Iri rekupedzisira basa, iro rakaburitswa Bolaño kumukadzi wake mumavhoriyamu mashanu akasiyana kuti ave nechokwadi chekurarama kwemhuri, rakazopedzisira raburitswa muvhoriyumu rimwe rakapfuura serimwe remabhuku ane mukurumbira echiLatin America ezana rino ramakore. Saizvozvo, mushure mekufa kwemunyori huwandu hwezvibvumirano zvekutsikisa hwakawedzera pa50 uye shanduro pa49.
Nyaya yaLarsson ndeimwe yekusabatsira kutaura zvishoma, kunyanya kana munyori akakurumbira weSweden we Millenium saga akafa mazuva mashoma kuburitswa kwebhuku rekutanga, Varume vasina kuda vakadzi, uye mushure mekuendesa vhoriyamu yechitatu yesaga kumuparidzi wayo, Mambokadzi mumuzinda wemadraft. Iyo Millennium saga yakava chiitiko chakatengeswa nemamirioni-emadhora kwete kungoshandira kutarisana nemusikana wemunyori nemhuri, asi kuramba wakanamatira pasaga iyo, zvinosuwisa, kuti yaisakwanisa kuenderera mberi nemunyori anga akatonyudzwa mukugadzirwa kwechina huwandu hwesaga.
Munyori weArgentina Salvador Benesdra akatambura nekuzvidya mwoyo uye kupenga kwepfungwa muhupenyu hwake hwese, chirwere chakawedzera zvisingaenzaniswi paakatanga riwaya, Muturikiri, yakarambwa nevose vaparidzi vaiona basa rake rakawandisa uye rakawandisa. Muna 1996 uye paakave nemakore mana, munyori akazviwisira kubva paburiro yegumi yechivako chake muBuenos Aires, kunyangwe aive nenguva yekutumira basa ku Planet Mubairo. Imwe yenhengo dzemakwikwi edare, Elvio Gandolfo, akafunga kushambadzira basa raBenesdra nerubatsiro rwemhuri yemunyori. Nhasi, Muturikiri anoonekwa seimwe ye iwo makuru makuru emabhuku eArgentina.
Imwe yenyaya dzehutsinye dzemunyori uyo asina kumboziva kukanganisa kwebasa rake muhupenyu aive mudiki Anne Frank. Yakashandurwa ikava izwi reiyo yaive yeimwe yezvinhu zvakasviba kwazvo munhoroondo, Frank aive mukadzi wechidiki wechiJuda uyo akapedza kubva pamakore gumi nerimwe kusvika pagumi nematatu akavharirwa mudzimba muguta reAmsterdam nemhuri yake. Nepo mauto eNazi akadenha guta guru reDutch, mukadzi wechidiki akatanga kunyora mudhayari raakange asingangonyatsoongorora mukukonana kwaiitika pasi rese, asi zvakare nemibvunzo yakajairika uye hupo hweanenge achiri kuyaruka. Mushure mekufa kwake mumusasa wevasungwa, iye oga akapona mumhuri, baba vake Otto Frank, akawana pepanhau rine mukurumbira munhoroondo.
Ungada here kuverenga iyo Dhayari raAna Frank?
Musi waFebruary 11, 1963, aine makore makumi matatu, Sylvia Plath akazvivharira mukamuri yake yemba ndokubatidza gasi kusvikira afa. Rufu rwekuti mabhuku anoramba achichema, kunyangwe zvakawanikwa makore mashoma apfuura kuti nyanduri ane mukurumbira vakatambura nebipolarity, chirwere chakabvisa fungidziro dzese nezvekufa kwababa chaakange asati akwanisa kukurira. Mushure mekufa kwake, murume wake Ted Hughes akapepeta zvinyorwa zvese Kunze kwedhayari raisanganisira zvinhu nezvehukama hwavo. Muna 1982, Sylvia Plath akava iye munyori wekutanga kugamuchira mubairo weNobel muLiterature. Mumwe wevanyori vane mukurumbira wetsamba uye zvechikadzi akafa asati aona kubudirira kwebasa iro kwemakore akatambura nechirwere chemunyori uye nematambudziko emari.
Vanyori ava vakazivikanwa mushure mekufa kwavo vanove mienzaniso mikuru yekuti basa rinogona kukosheswa nenzira dzakasiyana nevatsoropodzi kana kwenguva iyo, dzimwe nguva, inogona kunge isina kugadzirira kufamba nedzimwe nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori vakazozivikanwa mushure mekufa kwake
jamil isaac akadaro
Cesar Vallejo Asipo
Pindura kuna Jamil Isaac